युरोकपमा आज किङ रोनल्डोको पोर्चुगल र हंगेरी भिड्दै, कति बजे ? कसरी हेर्ने लाईभ ? सम्पुर्ण जानकारी | TajaKhabarTV
२०७८, १ असार मंगलवार १४:०८ June 15, 2021 ताजा खबरखेलकुद
काठमाडौं । युरोकपमा आज राति नेपाली समयअनुसार राति ९ः४५ बजे पोर्चुगल र हंगेरी भिड्दैछन् । यो खेल हंगेरीको बुडापेस्टस्थित रंगशालामा हुनेछ । पोर्चुगल युरोकपको डिफेन्डिङ च्याम्पियन हो । त्यसैले आजको खेलमा उसको स्पष्ट लक्ष्य जित नै हुनेछ । फेरि, यो समूह सहज पनि छैन ।
सन् २०१६ मा फ्रान्सलाई उसैको मैदानमा हराउँदै पहिलो पटक युरोकप जितेको पोर्चुगल यस पटक पनि स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कप्तानीमा खेल्दैछ । रोनाल्डो ३६ वर्ष भइसकेका छन् यस्तै ३८ वर्षीय पेपे पनि टिममा छन् । तर यसबाहेक टिममा क्षमतावान् युवा खेलाडीहरु पनि थपिएका छन् । रोनाल्डोले युरोकप सुरु हुनुअघि नै लगातार दुई युरोकप जित्नु महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् । यसले उनको नजर उपाधि रक्षामै भएको संकेत गर्दछ । युरोकपअघि कोरोना संक्रमण भएका डिफेण्डर जाओ कान्सेको स्थानमा पोर्चुगलले डिएगो जालोटलाई राखेको छ ।
रोनाल्डोले टिमले राम्रो तयारी गरेको र पहिलो खेल जित्नु महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । ५ वर्षपछि धेरै सम्भावना भएको युवा टिम रहेको र प्रतियोगिता अघि बढ्दै जाँदा राम्रो वा नराम्रो हुने थाहा हुने उनले बताए । २०१६ मा पोर्चुगल र हंगेरी समूह चरणमै खेल्दा ३–३ को बराबरीमा खेल टुङ्गिएको थियो ।
ठूला प्रतियोगितामा यी दुई टिम भिड्न लागेको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि सन् १९६६ को विश्वकपको समूह चरणमा भेट हुँदा पोर्चुगल विजयी भएको थियो भने पछिल्लो युरोकपमा बराबरी भएको थियो । पोर्चुगल अहिलेसम्म हंगेरीसँग पराजित भएको छैन । १३ खेलमध्ये पोर्चुगल ९ खेलमा विजयी हुँदा ४ खेल बराबरीमा सकिएको छ ।
मार्को रोस्सी, हंगेरी : हामी आफुलाई आफ्नो सिमितताबाट माथि उठाउन सबै गर्ने छौं । हामी हाम्रो सपना हासिल गर्न चाहन्छौं । सपना देख्न निशुल्क छ र हामी सपना देख्छौं । हाम्रो सपना पक्कै पनि हामीबीच नै कायम छ । हामी यो सपनाबारे कुरा गर्न र यसमा बाँच्न चाहन्छौं । आशा छ, युरोपका क्रममा यो सपनाले निरन्तरता पाउनेछ ।
फर्नान्डो सान्तोष, पोर्चुगल : पक्कै पनि हामी उपाधि दाबेदार हौ । यदी समूह चरणबाट माथि हामी उठ्न सकेनौं भने त्यो असफलता हुनेछ । तर, पोर्चुगलसँग यस्तो हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दैन । पोर्चुगलसँग प्रतियोगिताका हरेक टोलीसँग कडा टक्कर गर्ने सामथ्र्य छ ।